05/10/13 ~ Myanmar Forward
အမျိုးသမီး ၃ ဦးကို ၁၀ နှစ်ကြာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့သူ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရဖွယ်ရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကလိဗ်လန်းတွင် အမျိုးသမီး (၃)ဦးကို ဆယ်စုတစ်စုကြာ ပြန်ပေးဆွဲ ချုပ်နှောင်ကာ လိင် ကျေးကျွန် အဖြစ် အသုံးချ ခဲ့သူ သံသယ တရားခံမှာ သေဒဏ်ကျခံရမည့် အခြေအနေထိ ရှိနေကြောင်း သတင်း များက ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ အစိုးရ ရှေ့နေများသည် အမျိုးသမီး (၃)ဦးကို ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုဝန်းကျင်မျှ မြေတိုက် ထဲ ဖမ်းဆီး ထားသည့် အတွက် ယခုအခါ ပြန်ပေးမှု၊ မုဒိမ်းမှုများနှင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသော အေရီ ရယ်လ် ကက်စထရိုအား အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလျှက် ရှိသည်။ အိုဟိုင် အိုပြည် နယ် အစိုးရ ရှေ့နေများက အေရီရယ်လ်သည် အမျိုးသမီးများကို အကြိမ်ကြိမ် ဆိုးရွားစွာ အနိုင် အထက် ပြုကျင့်သလို အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန် ရလာ ချိန်တွင် ဖျက် ချရန် ဖိအားပေး ခိုင်းစေ ခဲ့ကြောင်း လည်း စွပ်စွဲ ထားသည်။
(ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကြာ ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီး ၃ ဦး)
အစိုးရရှေ့နေ တင်မိုမီ မက်ဂင်တီက အသက်(၅၂)နှစ်ရှိ အေရီရယ်လ်အား ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချ စေမှုများ အတွက် လူသတ်မှုနှင့် ပါ စွဲချက် တင် သင့်ပြီး သေဒဏ်ချမှတ်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ "အချက် အလက် တွေကို အခြေခံကြည့်ရင် ကျွန်တော်ကတော့ လိင်အကြမ်းဖက်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ အဖမ်းခံထားရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ချင်း စီအတွက် အကျုံးဝင်နေမယ့် ပြန်ပေးမှု၊ ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အကြမ်းပတမ်း တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင် ကိုယ်ဝန် တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုတွေ အတွက်ပါ အပြစ်ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲပါတယ်"ဟု သတင်း ထောက် များ အား ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းက "ကျွန်တော့် ဥပဒေ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဟာ လက်ရှိ စွဲချက် တွေ ထက် ပိုမြှင့်တင်ပြီး သေဒဏ်အထိ ထိုက်တန်တဲ့ အခြေအနေအတွက် ကြိုးစားနေဆဲပါ"ဟုလည်း ဆက် လက် ပြောဆို သွားသည်။
(အမျိုးသမီး ၃ ဦအား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည့် နေအိမ်)
အေရီ ရယ်လ်သည် (၂၀၀၂)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၄)ခုနှစ်အတွင်း အာမန်ဒါဘယ်ရီ၊ ဂျီနာဒီဂျီးဆက်စ်နှင့် မစ်ချယ်လ် နိုက်တို့ (၃)ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ ၎င်း၏ မြေတိုက်ခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး လိင်ကျေးကျွန်အဖြစ် ခိုင်းစေ ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် တွင်မှ ယခု သီတင်းပတ် အစောပိုင်းက အာမန်ဒါ ရုတ်တရက် လွတ်မြောက်လာကာ အိမ်နီး ချင်း တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ရဲများထံ ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် အမှုနှင့် ပတ်သက် သော အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ် ဖော်ပြခြင်း မရှိရန် တာဝန်ရှိသူများက ဂရုစိုက် လုပ်ဆောင် နေကြသည်။
ကလိဗ်လန် ဒေသခံ သတင်းမီဒီယာများက အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် သူမအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု (၅)ခါ ကြုံ ရပြီး အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ဝန် မပျက်စီးမချင်း အေရီရယ်လ်က သူမ၏ ဗိုက်ကို လက် သီးဖြင့် ထိုးခဲ့၍ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြနေကြသည်။ ယင်းအချက်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တစ်စုံ တစ်ရာ မှတ်ချက် မပေးသေးချေ။ APသတင်းဌာနက ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းအချို့ကို ကိုးကားပြီးနောက် အမျိုး သမီး များသည် သူမတို့ အဖမ်းခံထားရချိန်တွင် အငတ်ထားခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းများကို ခံခဲ့ ရ သည်ဟု ထွက်ဆိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဖမ်းခံရသူ အမျိုးသမီးများအနက် အာမန်ဒါသည် သမီးလေး တစ်ဦး ကို မွေးဖွားခဲ့ပြီး (၆)နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဟုလည်း သိရှိရသည်။
ရေမွှေးကုမ္ပဏီအား ဆယ်လီနာ ဂိုမက်ဇ်က တန်ပြန် တရားစွဲဆို
သူမကို သဘော တူညီမှု ဖောက်ဖျက်မှု အတွက် တရား စွဲ ထားသည့် ရေမွှေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ဆယ်လီနာ ဂိုမက်ဇ် က တန်ပြန် တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန် လူငယ် ဆယ်ကျော် သက် မင်း သမီးလေး သည် ရေမွှေးထုတ်လုပ်မှုတွင် သဘောတူညီမှု ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် မိမိတို့ နစ်နာ ရကြောင်း ရေမွှေး လုပ်ငန်း Adrenalinaက စွပ်စွဲခဲ့သည့်နောက် ဂိုမက်ဇ်ကလည်း တုံ့ပြန်ကာ ယခု ကိစ္စ အတွက် မိမိ၏ ငွေရေး ကြေးရေး နစ်နာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ (၅.၂)သန်း ရယူလိုကြောင်း တုံ့ပြန် စွဲချက် တင် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Come And Get Itစတား အဆိုတော်မလေးသည် ယင်းအတွက် တရား ရုံး တစ်ခုတွင် အမှန် တကယ် စွဲချက် တင်သွင်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း TMZက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရေမွှေးကုမ္ပဏီဘက်က ဂိုမက်ဇ်၏ အမည်ကို အသုံးပြုပြီး ရေမွှေးသစ် အမျိုးအစား တစ်ခု ထုတ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်း မှုမှာ ဆွေးနွေး သဘောတူပြီးမှ ပျက်ပြယ်သွားသည့်အတွက် ဂိုမက်ဇ်ကို စတင် တရား စွဲ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဂိုမက်ဇ်ကလည်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဂိုမက်ဇ်၏ ရှေ့နေ မိုက်ကယ် ဝိန်းစတန်က Adrenalinaသည် Selena-Brand ရေမွှေးသစ် တစ်ခုအတွက် ရောင်းချရငွေမှ (၅)ရာခိုင်နှုန်း ပေးအပ်မည်ဟု သဘော တူညီ ထားပြီး ယင်း၏ အနိမ့်ဆုံး တန်ကြေး သတ်မှတ်ချက်သည် ဒေါ်လာ (၅.၂)သန်းရှိသည်ဟု ပြောဆို ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
သံပုရာသီးနှင့် လေးညှင်းပွင့်ကို အသုံးပြု၍ ခြင်ပြေးအောင် လုပ်နည်း
Posted by drmyochit Friday, May 10, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
ဘော်ဘော် တို့ရေ...မိုးလေး က တဖြိုက် နှစ်ဖြိုက်ဆိုတော့ ..ခြင်တွေ ကိုက်ခံ ထိရောပေါ့ ။
ခြင်ဆေး ခွေ ..သုံးရင် ..အစစရာအရာရာ ..စိုးရိမ်နေရသေးတယ် ။
ခြင်တွေ အော်ကြောလန် အောင်ပြေးမယ့်..ဒီနည်းလမ်း လေး က စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ။
ပုံမှာတွေ့တဲ့ အတိုင်း... သံပုရာသီး ကို တခြမ်း ..ခြမ်း..ပြီးတော့ လေညှင်းပွင့်လေးတွေ ကို ..အပေါ် မှာ ..အရိုး တံ ကနေ သံပုရာသီးခြမ်း မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစိုက် ။
သံပုရာ နွမ်းရင် တော့ ..နောက် အသစ် တစ်လုံး ..လဲဖို့ မမေ့နဲ့ အုံး..။ ^___^
မိုးဦးရာသီ မို့ ..လူကြီးရော .. ခလေးပါ ..သွေးလွန်တုတ်ကွေး..အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဒီနည်း လေး ကို ....စမ်းကြည့်ကြပါလား။
ပိုက်ဆံ လည်း ..အများကြီး..သုံးစရာ ..မလိုဘူးလေနော့ ။
Credit: useful info ^__^
EFFECTIVE method of keeping mosquitoes at bay! Simply slicealime in half and
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ရှိသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဂိုအင်ပါယာ၏ နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သော ဘဟာဒူး ရှားဇဘား ၏ ရုပ်ကြွင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် သယ်ဆောင်မည် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာ ဆက်လက် ထားရှိ သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ဒုတိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Sailas Thangal က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသော အိန္ဒိယနိုင်ငံရေး ပါတီများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော အိန္ဒိယ ဘုရင်၏ရုပ်ကြွင်းကို ပြန်လည် တောင်းဆိုသွားမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေမှုကို ၄င်းက ယင်း သို့ ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းရုပ်ကြွင်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး အထိမ်းအမှတ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း အပြင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကြာ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ကိုလိုနီပြုခဲ့သည်ကို ထင်ဟပ် စေသည့် အမှတ်အသားလည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် အိန္ဒိယအစိုးရ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယ ဘုရင် ရုပ်ကြွင်းကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် လုံးဝမရှိကြောင်း ၄င်းက ထုတ်ဖော် ပြောကြား သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း မြန်မာဘုရင် သီပေါမင်း၏ ရုပ်ကြွင်းကို နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး အမွေအနှစ် တစ်ခု အဖြစ် ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အင်အားကြီး ပါတီတစ်ခုဖြစ်သော BJP ပါတီ ခေါင်းဆောင် Sushma Swaraf က အိန္ဒိယ နိုင်ငံကို ကိုလိုနီလက်အောက် သို့ မရောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံး ဘုရင် ရုပ်ကြွင်း ကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းသည် နိုင်ငံသားများက ပေးဆပ်သော အကောင်းဆုံး ဂုဏ်ပြု မှုဖြစ် သည်ဟု ပြောကြားကြောင်း အိန္ဒိယသတင်း မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြလျက် ရှိသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ၁၈၅၇ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဂို အင်ပါ ယာ၏ နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သော ဘဟာဒူးရှားဇဘား ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။
ယင်းအထိမ်းအမှတ် နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ပါတီအချို့ စုပေါင်းကာ ဆုတောင်း ပွဲများ တစ်နေကုန်ပြုလုပ်၍ အစိုး ရထံ ရုပ်ကြွင်းပြန်လည် တောင်းဆိုရန် အဆိုပြု မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြ ထား သည်။
အိန္ဒိယဘုရင် ဘဟာဒူးရှားဇဘားသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ ၍ နေထိုင်လာခဲ့ရာမှ ၁၈၆၂ ခုနှစ် (အသက် ၈၇ နှစ်) တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး အမှတ် ၆ ဇီဝက လမ်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း အနီးတွင် ၄င်း၏ ရုပ်ကလာပ်ကို မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်၍ အထိမ်းအမှတ်ဗိမာန် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
အလား တူပင် မြန်မာဘုရင် သီပေါမင်း၏ အရိုးအိုးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် လ ကုန်ပိုင်းက အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်း ဆွေက အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, May 10, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး တံတားဦးမြို့နယ် အမှတ် (၂)နယ်မြေ၊ နီးပါးတန်း ရပ်ကွက်ရှိ ဘေးလုံ ပရိ ယတ္တိ စာသင် တိုက်တွင် မေလ ၈ ရက်နံနက်ပိုင်းက သံဃာတော် ၁၂ ပါးနှင့် လူ ၃ ဦး အစာ အဆိပ် သင့်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
စာသင်တိုက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အလှူမှ ကျွေးမွေးသော ကြက်သား ဒံပေါက်နှင့် ချည်ရည်ဟင်း၊ ငါးပိ ကြော်တို့ကို နံနက် ၅နာရီအချိန်ခန့် က အရုဏ်ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီး ၄၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင် သံဃာ ၁၂ ပါးနှင့် စားသုံး မိသူ သုံးဦးတို့ အော့အန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်းဖြစ်ပေါ်ကာ တံတားဦး
မြို့နယ် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသခဲ့ကြောင်း ကျောင်းတိုက်မှ စာချဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိစ္စက မိန့်ကြားသည်။
“ငါးပါးကတော့ လိုအပ်တာတွေ ကုသပြီး နေ့ချင်းဆင်းလာတယ်။ ကျန်တဲ့ ခုနစ်ပါးကတော့ (မေ ၁၀ ရက်) လောက် ကျရင် ဆင်းရမယ် ပြောတယ်။ လူသုံးယောက်ကတော့ ဒီနေ့ဆင်းခွင့်ရမယ်ကြားတယ်။ စိုး ရိမ်စရာ အခြေ အနေ မရှိ တော့ပါဘူး"ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
အလှူရှင်ဆွေမျိုးများအပါအ၀င် ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ သံဃာအချို့နှင့် အလှူလာဧည့်သည်အချို့ မူးဝေ အော့ အန်ကာ အစာအဆိပ်သင့်ဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ဆေးရုံတက်ကုသရသည့် အခြေအနေမ ရောက် ခဲ့ ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ သည့် ဆရာတော်အချို့က မိန့်ကြားသည်။ ဆေးရုံတက်သံဃာများတွင် ပထမပြန် စာမေးပွဲ ဖြေဆို နေသည့် သံဃာ ငါးပါးပါဝင်သဖြင့် စာမေးပွဲကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်း ဆရာ တော်က မိန့်ကြားသည်။
“ကျောင်းကအသက် ကိုးနှစ် လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကိုရင်လေးဆို ပါးစပ်ထဲက အရည်တွေထွက်လာတယ်။ ဆေးတွေ လိုပဲ နံလည်းနံတယ်”ဟု ယင်းကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးဝိမလက မိန့်ကြားသည်။
တံတားဦးမြို့နယ် ဆေးရုံအုပ် ကြီးက ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မပြုပေ။ တံတားဦး မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ရုံးနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာန တို့ထံမှ လည်း အတည်ပြု ချက်မရပေ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အဆောက် အအုံ ပြိုကျမှုကြီး အတွင်း ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ထွက်ပေါ်လာသည့် မြင်ကွင်း တစ်ခုသည် ရင်နင့်ခြောက်ခြားစရာ ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ အထည် ချုပ် စက်ရုံတစ်ခု အပါအဝင် ကုမ္ပဏီများ၊ ရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် (၈)ထပ် အဆောက် အအုံကြီး တစ်ခု ဒါကာမြို့တော်တွင် ပြိုကျခဲ့ရာ လူပေါင်းမြောက်မြားစွာ (ယနေ့အချိန်ထိ ၁၀၀၀ ကျော် သွားပြီ ဟု သတင်းများတွင် ဖော်ပြ) သေဆုံးခဲ့ရပြီး ယခုထိလည်း အပျက်အစီးများအောက်မှ အလောင်းများ ထွက်ပေါ် နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများသည် အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားနေရင်း စုံတွဲတစ် တွဲ၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး တွယ်ယှက်ရင်း အသက် ကုန်ခဲ့ ရှာကြောင်း ကြေကွဲဖွယ် သိရှိခဲ့ရသည်။
(တစ်ဦးကိုတစ်ဦး တွယ်ယှက်ရင်း သေဆုံးခဲ့သည့် စုံတွဲ)
ဖုန်မှုန့်များ၊ သတ္တုစများ၊ အပျက်အစီးများ အောက်တွင် အမျိုးသမီး အလောင်းကို စတင် တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး သူမ ကို တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ဖက် ကာကွယ်ရင်း အတူတကွ သေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသား၏ အလောင်းကိုပါ ရှာ ဖွေ တွေ့ရှိ လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား၏ အလောင်းတွင် မျက်လုံးမှ သွေးစီးကြောင်းများ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ခြောက် သွေ့နေ သည်ကိုလည်း ဝမ်းနည်းနာကျင်ဖွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ စုံတွဲသည် အထည်ချုပ် စက်ရုံ လုပ်သားများဟု ယူဆရပြီး ပြေးမလွတ်နိုင်တော့သည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေကို အတူတကွ ရင်ဆိုင် သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးများက စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
(ပြိုကျသည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်အား ဖမ်းဆီးလာစဉ်)
ပြီးခဲ့သည့်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆောက်အအုံ ပြိုကျမှုကြောင့် လူပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော် သေဆုံးကာ (၂၅၀၀) ကျော် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တစ်ရက်တည်းကပင် ရာနာ ပလာ ဇာ နေရာဟောင်း အပျက်အစီးပုံအောက်မှ အလောင်း(၉၄)ခု ဆွဲထုတ်ခဲ့ရသည်။ အထည်ချုပ် စက်ရုံ တွင် လုပ်သား ထောင်ပေါင်း အတော်များများ ရှိနေပြီး အနောက်နိုင်ငံများသို့ ကုန်ချော အထည်အလိပ်များ တင်ပို့ ရောင်း ချလေ့ ရှိသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် အခြားသော စက်ရုံ မတော် တဆ မှုများ လည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံရေးအတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ သည်။
(ပြိုကျသည့် အဆောက်အအုံအား ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ်)
ဒေသခံ သတင်းဓာတ်ပုံသမား တက်စ်လီမာ အက်ခ်တားက "ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး အချက်အလက်တွေ ရှာခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် အကြောင်းတော့ ကျွန်တော် သေချာမသိဘူး။ သူတို့ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာလည်း မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လို ဆက်နွယ်တယ် ဆိုတာ လည်း မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ ကြေကွဲစရာပါ။ နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ စုံတွဲလို့တော့ ကျွန်တော် ထင်မိတယ်"ဟု ဝမ်းနည်း စွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။
(အထည်ချုပ်စက်ရုံပြိုကျပြီး လူအများအပြား သေဆုံးရမှုအတွက် ဆန္ဒပြနေသူများ)
၎င်းက "ကျွန်တော် တစ်နေကုန် အဆောက်အအုံ အပျက်အစီးတွေ ကြားထဲမှာ သွားလာ နေခဲ့တယ်။ အသက် ရှင်လျှက် ကယ်ထုတ် နိုင်သူတွေ ဆေးရုံ ပို့တာ ကိုလည်း ကြည့်နေ ခဲ့ရတယ်။ ဆွေမျိုး သားချင်း တွေရဲ့ စိုးရိမ် နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ် မြင်ရတဲ့နောက် ကျွန်တော် စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ တော်တော် လေး ချုံးချုံး ကျသွားပါတယ်။ နေ့လယ် (၂)နာရီလောက်မှာတော့ ဒီစုံတွဲကို ကျွန်တော် အပျက် အစီးတွေ အောက်မှာ တွေ့လာခဲ့တာပါ။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းတွေက ကွန်ကရစ်တုံးတွေ အောက် မှာ လုံးဝ ပိမိနေပြီ။ အမျိုးသားရဲ့ မျက်လုံးက စီးကျနေတဲ့ သွေးတွေက မျက်ရည် စီးကြောင်း နဲ့တောင် တူပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီမြင်ကွင်းကို မယုံနိုင်လောက်အောင် တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။ သူတို့ကို ကျွန် တော် တစ်သက်လုံး သိကျွမ်းခဲ့သလို၊ ကျွန်တော်နဲ့ အရမ်း နီးစပ်ခဲ့ဖူးသလို ခံစားမိသွားတယ်"ဟုလည်း ဆို သည်။
ယင်း ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ယူခဲ့သည့် တက်စ်လီမာက "တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ အရေအတွက် သက်သက် နဲ့ စုဖွဲ့ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်အားခ သက်သာမှုကြောင့်တော့ အသက်တွေရဲ့ တန်ဖိုးက သက်သက် သာသာ ဖြစ်နေတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့။ အားလုံးဟာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို လူသားတွေ ပါပဲ"ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဝတ်အထည် တင်ပို့ ရောင်း ချမှု အများဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း လုပ်သားများကို အလွန်နိမ့်ပါးသည့် လုပ်ခပေးချေမှုနှင့် အလုပ် ခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သည့် အနေအထားများကြောင့် ကြီးမားပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှု များနှင့် ကြုံ နေ ရသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရာနာပလာဇာ ပိုင်ရှင် အပါအဝင် လူအချို့ကို ရဲများ က ဖမ်းဆီးထားပြီး လူများစွာ သေဆုံးစေလောက်သည့် မျက်ကွယ်ပြုမှုအတွက် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်လျှက် ရှိသည်။
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦး နေမျိုးဇင်ကို ပြစ်မူ ကြွေးကျန် ပုဒ်မ ၄ဝ၁(၁) နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ချမှတ် လိုက် တာ ဟာ ဥပဒေကြောင်း အရ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဦးနေမျိုးဇင်ရဲ့ရှေ့နေ ဦးရော ဘတ်စန်း အောင်က ပြော ပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် အရ ပြန်လွတ် ပေး လိုက် တာကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး အမိန့်နဲ့ ပြန်ဖမ်း တယ် ဆိုတာ မဆီလျော် ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဥပဒေ ပြဿနာဟာ ဦးနေမျိုးဇင်တစ်ဦးတည်းရဲ့ ပြဿ နာ မဟုတ် တော့ဘဲ၊ သမ္မတ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်လာသူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ ဦးရော ဘတ်စန်း အောင်က ပြောပါတယ်။
“တရားရုံးရှေ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ ခုခံချေပခွင့်ကို ပေးသင့်တယ်ပေါ့၊ အသရေဖျက်မှုတစ်ခုအတွက် ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရလို့ အရင်ပြစ်ဒဏ်ဟောင်းကို ပြန်ပြီးတော့ကျခံရမယ်ဆိုရင် အရပ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုသူများကလာပြီး ပါးရိုက်မယ်၊ အပြန်အလှန်ဖြစ်လို့ ဒဏ်ငွေဆောင်ရရင်ရော၊ ဥပမာ ဧည့်စာရင်းမတိုင်လို့ ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရ ရင်ကော ၄ဝ၁ နဲ့ ပြန်ခံ ရမှာလား ”
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားလွှတ်တော်ချုပ်အထိ တင်ပြဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
ဦးနေ မျိုးဇင်ကို ပန်းတနော်ရဲစခန်းက အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၂ သောင်း ဒါမဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၃ လကျခံဖို့ အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေမျိုးဇင်က ထောင် ဒဏ်ကို ခံယူလိုက် စဉ်အတွင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအမိန့်နဲ့ ပုဒ်မ ၄ဝ၁ (၁) အရ အရင်ပြစ်မှုဟောင်းနဲ့ ထောင် ဒဏ် ၆ နှစ် ကျခံ ရမှာဖြစ်ကြောင်း ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တွံတေး-ဒလ ကားလမ်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူသေမှု အမြင်အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေ
ယမန်နေ့က တွံတေးမှ ဒလသို့ ရေသွားလှူသော မောင်ထွဋ်မင်းနိုင်သည် အပြန် တွံတေး ကားလမ်းမ ပေါ်တွင် ည ၈ နာရီခန့်၌ သေဆုံးသွား ခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်ပွားမှုအပေါ် မိသားစုနှင့် ရဲများ အကြား အမြင် အမျိုးမျိုး ဖြစ် နေကြကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူမှာ မောင်ထွဋ်မင်းနိုင်(၂၃)နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒလတွင် ရေဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံ နေရ သောကြောင့်တွံတေးမှ ထော်လာ ဂျီဖြင့် ရေသွားရောက် လှူဒါန်း ခဲ့ပြီး အပြန်လမ်းတွင် သွားရောက် လှူဒါန်းသော အဖွဲ့သည် အားလုံး မှုးနေကြပြီး မောင်ထွဋ်မင်းနိုင်သည် ကားတိုက်ခံရ၍ သေဆုံးသည်ဟု အတူ သွားလှူ ကြသူများက ပြောကြောင်း၊ သို့သော် သေဆုံးသူသည် ကားတိုက်ခံရ၍ သေဆုံးခြင်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်း၏အကို
ဝမ်းကွဲ တော်ဆက်သူ ကိုဇော်ဇော်က ပြောကြားသည်။
“ဒဏ်ရာတွေက ကားတိုက်ထားတာနဲ့ မတူဘူး။ ရိုက်ထား ထိုးထာတဲ့ပုံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူတစ် ယောက် ထဲကို ထားခဲ့ကြပြီးမှ ကားတိုက်ခံရတယ်ပြောတာ”ဟု ကိုဇော်ဇော်က ဆက် လက် ပြောကြား သည်။ ယင်းရေသွားလှူသော အဖွဲ့တွင် သေဆုံးသူ အပါအဝင် ကျား ၁၃ယောက် ထော် လာဂျီဖြင့် ပြန် လာခြင်း ဖြစ်ကြာင်း သိရသည်။
၎င်းဒဏ်ရာသည် မိမိအမြင်ဖြင့်ဆိုလျင် ကားတိုက်ခံရသော ဒဏ်ရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူသည် သွားရောက် သယ်ယူ ချိန်တွင် ကားလမ်းမ၏ အလယ်တွင် ဖြစ်နေသောကြာင့် ပြုကျခြင်းကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး အသေ အခြာတော့ မပြောနိုင်ကြောင်း သေသူအား သွားရောက်သယ်ဆောင်သူ စိတ္တ သုခ အရေး ပေါ် ကူညီရေး အဖွဲ့မှ ကိုဖြိုးကိုကိုရွှေက ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် သေဆုံးသူနှင့် ပတ်သက်၍ တွံတေးမြို့ပေါ်တွင် အမျိုးမျိုး ထင်ကြေးပေးနေကြကြောင်း၊သို့သော် သေဆုံး သူသည် ကားတိုက်ခံရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအမှုကို ၃၀၄(က)ဖြင့် အမှုဖွင့် ထားကြောင်း ရဲစခန်းမှ အရာခံ တိုးတိုးလွင်က ပြောကြားသည်။ ၎င်းအမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆေးစစ် ချက်များ မထွက်ရှိ သေးကြောင်း လည်း သိရသည်။
ဟိုပန်တွင် ကန့်ကွက်၍ ၀င်မရသည့် မင်းကိုနိုင် သီပေါတွင် ဘာပြောခဲ့သလဲ
ဟိုပန်မြို့မှ ဒေသခံများ ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် မင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့သည် သီပေါမြို့သို့ ရောက်သည့်အခါ ပြည်သူ အ ကျိုး အတွက် ဘာတွေ ပြောမည် ထင်သနည်း။ မပြောပါ။ အစိုးရ မကောင်းကြောင်းသာ ပြောသည်။ ပုဒ်မ ၄၀၁ ကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြောသည်။ လက်မခံပါဟု ဆိုသော်လည်း ထောင်ထဲပြန်နေမည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ ၈၈ ပွင့် လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ နယ်တကာလှည့်ပြီး ဘာတွေပြော၊ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတာ သိစေဖို့ DVB က ဖော်ပြထားတဲ့ မင်းကိုနိုင်၏ သီပေါရောက်စကားကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ ကိုယ်ကျိုး မထိခိုက်စေရန်နှင့် အစိုးရကို အပုပ်ချရန် မှ တပါး အခြားမပါပေ။
ပုဒ်မ ၄၀၁ နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို လွှတ်တဲ့အချိန်မှာ ထောင်ထဲရှိနေတဲ့ အချိန် လက်မှတ် မထိုး ခိုင်း ခဲ့ဘဲေ ထာင်အပြင်ရောက်မှ ခင်ဗျားတို့ကို ပုဒ်မ ၄၀၁ နဲ့လွှတ်တာလို့ အပြင်ရောက် မှပြော တာဖြစ် တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သဘောမတူဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ၊ နံပါတ် ၁ လုံးဝသဘော မတူဘူး၊ အကြွေး ကျန် တဲ့ကိစဟာ လုံးဝမရှိသင့်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို့ အသံကောင်း ဟစ် ထား တယ် ဆိုရင် ဒါမလိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြောတယ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံး လက်တွဲပီးတော့ ဒီမိုကရေစီလုပ်ရမဲ့အချိန်မျိုးမှာ ၄၀၁ အရ အကြွေး သတ်မှတ်ပီးတော့ ပြန်ပီးပစ်ဒဏ်အနေနဲ့ပေးချင်းဟာ နံပါတ်၁ လုံးဝ သဘော မတူနိုင် ဘူး။ လုံးဝလက်မခံနိုင်သလို ဒီပုဒ်မအရ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဒီအကြွေးမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားတောင်းဆိုတယ်” လို့ ရှမ်းပြည် မြောက် ပိုင်းခရီးစဉ် မှာ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်က သီပေါ မြို့သူမြို့ သား များ ကို ပြောကြား။
ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ အရက်သေစာသောက်စားပြီးလာရောက် ဖူးမြော်သည်ကို တားမြစ်သင့်
Posted by drmyochit Friday, May 10, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
မြန်မာ နိုင်ငံရှိ အထင် ကရနေ ရာများတွင် ပါဝင် သည့် ရွှေတိဂုံ ဘုရားသို့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား များ လာ ရောက် လေ့လာ ဖူးမြော် ကြသဖြင့် အရက် သေစာ သောက်စားပြီး ဘုရားသို့ လာရောက် ကြ သည် ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တားမြစ်သင့် ကြောင်း ဘုရား ဖူးပြည်သူများထံ မှ သိရသည်။
“ရွှေတိဂုံဘုရားကို လာရောက် လေ့လာတဲ့ နိုင်ငံခြား သား ဧည့်သည် တွေ များလာတဲ့အတွက် အရက် သေစာ သောက်စားပြီး လာရောက် ကြတဲ့ လူငယ်အချို့ရှိတယ်။ ဘုရားစောင်းတန်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေး မှု အရ စကပ်တို၊ ဘောင်းဘီတို၊ ၀တ်ဆင်ခြင်းများ ကို စစ်ဆေးသည့်နေရာတွင် တစ်ပါတည်း အရက် သေစာ သောက် စားခြင်းကို တွေ့ရှိပါက တက်ရောက်ခွင့်မပေးသင့်ကြောင်း” ဟု ဘုရားဖူး သံဃာတော် တစ်ပါး မှ မိန့်တော် မူသည်။
နိုင်ငံတော် တိုးတက် ပြောင်းလဲ မှုကို စိတ်ဝင်တစားလာရောက်လေ့ လာကြသော နိုင်ငံတကာမှ အသိ ပညာရှင် အတတ် ပညာရှင် များက ရှုံ့ချ ကဲ့ရဲ့မှုများ မရှိအောင် တင်းကြပ် စွာကြပ်မတ်သင့်ကြောင်း ခရီး သွား အေဂျင်စီ တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးမှပြောကြားသွားသည်။
“ဒီလိုအရက်သေစာသောက် စားမူးရူးပြီး ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် တက်လာတဲ့ လူငယ်အချို့က အသိမဲ့ပြီး မြန်မာ အမျိုး သမီး အချို့ နှင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားများကို မထီမဲ့မြင်ပြောတာတွေကို ခဏ ခဏတွေ့ရ ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားခရီး သွားများကဒီလိုသောက်စားပြီး ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်ကို တက်လို့ရသလားဟု မေး သည့် အတွက် သာသနာဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် အရက်သေစာ သောက်စား လာပြီး ဘုရားလာရောက်ဖူးမြော်သည်ကို တားမြစ်သင့်သည်”ဟု အဆိုပါ ပုဂ်္ဂိုလ်မှပြောကြားသွားသည်။
အခုခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ လင်ယူ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းရှိစေချင် ပါ တယ်။ ပရမ်းပတာမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ဘာသာတူ လူမျိုးတူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုကြ ဖို့ အနူး အ ညွတ်တောင်း ပန်ချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးလေးတွေဟာ အိမ် ထောင် ပြု တဲ့ အခါမှာ စည်းကမ်းမရှိဘဲ စိတ်ဆန္ဒကိုအလိုလိုက်၍တစ်မျိုး၊ ငွေကြေးမက်၍တစ်သွယ်၊ လူ မျိုးခြား ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုနေကြတာတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အပြင်ပန်းကပဲကြည့်ကြည့်၊ အ တွင်းကိုလည်း ကြည့်ကြည့် တစ်သံသရာလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မည့်ကိစ္စကို လက်ယက်ခေါ်လိုက်သလိုပါပဲ။
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဘာသာခြားကို ယူလိုက်ရပြီဆိုတည်းက ကိုယ်က မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြည်ညို လေးစား ရတဲ့ မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ကို အရင်ဆုံးခြေနဲ့ နင်းချေဖျက်စီးလိုက်ရပြီဆိုတည်းက အကုသိုလ် အတော် ပင်ကြီး သွားပါပြီ။ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒာ ဘိဝံသ ဟောခဲ့တဲ့ တရား တစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သက်ရှိထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကို မဆိုလင့် ဦးတဲ့။ မြတ် စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ကိုယ်ပွား ဥဒိဿကစေတီတော်ဖြစ်တဲ့ ပုံတော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရိဘောဂစေတီ ထိုက်တဲ့ မဟာ ဗောဓိ ညောင်ပင် ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ ယုတ်မာတဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ ဖျက်စီး၍ ပျက်ဆီးမည်ဆိုပါလျှင် မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကို သွေးစိမ်းတည်အောင်ပြုလိုက်တဲ့ကံနီးပါး အကုသိုလ်ကြီးတယ်လို့ နားကြားဖူး၏။
ဆိုတော့ အဲဒီလိုဘာသာခြား လူမျိုးခြားကို ယူလိုက်ပြီဆိုတည်းက တစ်သံသရာလုံးစာအတွက် အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင် ရပြီ ဆိုတာ မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပဉ္စာနန္တိယကံလောက်နီးပါး အပြစ်ကြီးတဲ့ အ ကုသိုလ် ဖြစ်၍ပင်ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့် ဒီဘဝမှာလည်း ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူလို့ ဆင်းရဲရမည့်ဒုက္ခ၊ မြတ်စွာ ဘုရားပုံတော်ကိုနင်းမိလို့ တစ်သံသရာလုံး ဆင်းရဲရမည့်ဒုက္ခဆိုတော့ ရှုံးပြီးရင်းရှုံးရင်းဆိုသလို အရှုံး များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်၍ အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်လှ၏။
လူမျိုးခြား ဘာသာခြားဆိုတာ ဘုရားအပေါ် ကြည်ညိုနိုင်တဲ့ သဒ္ဓါတရား၊ တရားအပေါ် ယုံကြည်နိုင်မယ့် သဒ္ဓါ တရား၊ သံဃာအပေါ် ဆည်းကပ်နိုင်မယ့် သဒ္ဓါတရားရှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ မှာ အားကိုးယုံကြည် မြတ်နိုးရာ သီးခြားဘာသာတစ်ခု ရှိနေလို့ပါပဲ။ သူ့ဘာသာကတခြား၊ ကိုယ့် ဘာ သာ က တစ်မျိုးဆိုတော့ သဒ္ဓါတရား၊ တူမျှဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သဒ္ဓါ တရားခြင်း မတူမျှတော့ အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေလဲဆိုရင် မိမိက ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးဖြစ်လို့ ဘုရားသွားကျောင်းတက်လုပ်ချင်တယ်၊ ဥပုသ် သီလ ဆောက် တည် ချင်တယ်၊ ဆွမ်းလောင်းချင်တယ်၊ အဲဒီတော့ မိမိယူထားတဲ့ ယောက်ျားက ဘာသာခြားဖြစ်နေတော့ ဒီလို ဗုဒ္ဓဝေယျာဝေစ္စ၊ သံဃာ့ဝေယျာဝေစ္စတွေ ထပ်တူထပ်မျှ ပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဘာ သာခြား နဲ့ မရခင် အပျိုစင်ဘဝတုန်းက မင်းလည်း မင်းကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုးကွယ်၊ ငါလည်းငါကြိုက်တဲ့ ဘာသာ ကို ကိုးကွယ်မယ်ဆိုပြီး ကတိစကားတွေ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါ ဘယ်ဘာ သာခြား ယောက်ျားကမှ အိမ်ဦးခန်းမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုထားပြီး မိန်းမ ကို ကိုးကွယ်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသေအချာယုံကြည်ထားလိုက်ပါ။
ဆွမ်းဟင်း ဆွမ်းတို့ကိုလည်း သံဃာတော်များကို သဒ္ဓါကြည်ဖြူ ဖေးမကူပြီး လှူဒါန်းခိုင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ တော့ မင်းလည်းမင်းကြိုက်တဲ့ ဘာသာကိုးကွယ်၊ ငါလည်းငါကြိုက်တဲ့ ဘာသာကိုးကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ စကား တွေဟာ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေရဲ့ မာယာတစ်မျိုးပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ မယုံမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံလိုက် လို့ ပုံအပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်သွားသူတွေကို သင်ခန်းစာယူထားသင့်ပါတယ်။
ပထမ ညားခါစ ဟုတ်မလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အချိန်လေးကြလာတာနဲ့အမျှ အနုနည်း အကြမ်းနည်း အမျိုး မျိုးသော နည်းပရိယာယ်တွေနဲ့ ကလိမ်ဥာဏ်ဆင်ပြီး ဆွဲဆောင်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံး အဲဒီလူမျိုးခြား ဘာ သာခြား အသိုင်းအဝိုင်းခြားထဲမှာပဲ ဘဝကို စုံစုံမြုပ်သွားရတော့တယ်။ နောက်ဆုံး သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ အကြောင်း ဆက် ပေါင်းဖက်လို့ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဘဝကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ထုံးလမ်းစဉ်လာအရ သားလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာလို့ သရဏဂုံ ပီပီ သသ ဆိုတတ်လာရင် ဘုရားကျောင်းကန်မှာသွားပြီး တတ်နိုင်တဲ့ အလှူဒါနလေးနဲ့ဖန်ရည်သင်္ကန်း ဝတ်ဆင်မြန်း ပေးပြီး သာသနာ့အမွေကို ခံယူပါတယ်။ သမီးမိန်းကလေးမွေးပြီးရင်လည်း သရဖူ လေးကို ဆောင်း မကိုဋ်တန်ဆာ အဝတ်လေးကို ဝတ်စေပြီး နားသမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
တကယ်တမ်းမြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် လူမျိုးခြား ဘာသာခြားနဲ့ရလို့ သားလေး သမီးလေး မွေးဖွား လာတဲ့အခါ “ကိုကို လူမျိုးခြားကြီး ကျွန်မသားလေး အရွယ်ရောက်လာပြီ၊ အဲဒါရှင်ပြုပေးရအောင်နော်၊ သားလေး ရှင်ပြုရင် ကိုကိုဘာသာခြားကြီးက သပိတ်လွယ်၊ ကျွန်မက ကိုရင်လေးအတွက် သင်္ကန်း ခေါင်းရွတ် မယ်၊ အလှူဒါနပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဘုရား၊ တရား သံဃာကို ကြည်ညိုပြီး အတူတူ ရေစက် သွန်းချ အမျှပေးဝေမယ်နော်” လို့ဆိုပြီး ပြောလို့ရမလား။ အဲဒီလို သဒ္ဓါကြည်ဖြူပြီး ဖေးမကူ လုပ်ခဲ့ တာတွေ ရော ဘယ်တုန်းက ရှိခဲ့ကြလဲ။
များသောအားဖြင့် သူတို့ဘာသာ သူတို့လူမျိုးထဲကိုပဲ ရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်သွားကြ တာချည်းပါပဲ။ ကိုယ့် ဘက်ကို ပါလာတယ်ဆိုတာကတော့ တစ်သောင်းတောင်မှ တစ်ယောက် မသေချာပါဘူး။ ဘာလို့ ဒါတွေ ကို အရေးတကြီးပြောနေရတာလဲဆိုရင် တချို့မြန်မာအမျိုး သမီးလေးတွေ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် ဘာသာ ရေးအခြေခံစိတ်ဓာတ်နည်းပါးပြီး လင်ယူပက်စက်ေ နကြလွန်းလို့ပါ။
(ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ)။ အဲဒီလို လင်ယူပတ်စက်ရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင် အဖြေကရှင်းပါတယ်။ အချိန်ကြာ လာနဲ့အမျှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အင်အားနည်းပြီး ဘာသာခြား လူမျိုးခြားအင်အားများလာကာ နောက် ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ မဆင်မခြင် အိမ်ထောင်ပြု မှုကြောင့် တစ်မျိုးသားလုံး တိမ်ကောရမည့် အဖြစ်မျိုးကို ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။ တစ်မျိုးသားလုံး တည်တံ့ ခိုင်မြဲ တိုးတက်ဖို့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာဝင် အချင်း ချင်းသာ အိမ်ထောင်ပြုကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
(၁)။ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာဝင်ဆိုင်များမှာ အားပေးကြပါ။ ငွေကြေးချမ်းသာပြည့်စုံသော သူများအနေနဲ့ (၉၆၉) အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းဆိုင်၊ ဒန်ပေါက်ဆိုင်၊ စားသုံးကုန်ဆိုင်နှင့် အခြားဆိုင် များကိုလည်းကောင်း၊ ထိုမှတဖန် အနီးအဝေး မော်တော်ယာဉ်ကားလိုင်းများကို လည်းကောင်း တည်ထောင်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း ချင် ပါတယ်။
၂။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းသာ အတွင်းရေး အပြင်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးဆောင်ရွတ် ရန်ပေါင်း သင်းနေ ထိုင်ကြပါ။
၃။ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြု လက်ထပ်ကြပါ။ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာဝ င်အ ချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် တစ်ဦးနှစ်တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီကြရန် ဆိုတဲ့ အချက်များ ကို လိုက် နာ ကျင့်သုံး ကြပါလို့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။
စာဖတ်သူ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်) များအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိအကျိုး သူတစ်ပါး အကျိုး လောကအကျိုး သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီးဆောင်ရွတ်နိုင်ကြပါစေ။
သာသနာကာကွယ်ဖို့ တရားဟောတဲ့ သံဃာကိုတော့ အချင်းချင်း အပြစ်တင်ကြတယ်
၂၀၀၇ မှာ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်လို့ သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ။
၂၀၁၃ မှာ သာသနာကို ကာကွယ်မှ ဗီလိန် ဖြစ်နေရပြီလား ဆရာတော် ။
နိင်ငံရေးသမားတွေက ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်ချင်တယ် ။
ဆရာတော်တို့က သာသနာတော်ကို ကာကွယ်ချင်တယ် ။
နိင်ငံရေးသမားတွေက စစ်တပ်အောက်ရောက်မှာ သေမလောက် ကြောက်တယ် ။
ဆရာတော်တို့က သာသနာပျောက်မှာ သေမလောက် ကြောက်တယ် ။
လက်ပံတောင်းက သံဃာတော်တွေ မီးလောင်တော့ သူတို့ ကမ္ဘာမကြေ ဖြစ်ကြတယ် ဆရာတော် ။
ဆရာတော် ဦးသောဘိတ မီးရှို့ အသတ်ခံရတော့ သူတို့ ခွင့်လွှတ် စေချင်ကြတယ် ဆရာတော် ။
ဒါကို ပြဇာတ် တခုလို့ သတ်မှတ်ပြီး ၉၆၉ ကို ဗီလိန် လုပ်ပစ်ကြတယ် ဆရာတော် ။
နိင်ငံရေးသမားတွေက လူ့အခွင့်အရေးကို သိပ်ပြောကြတယ် ဆရာတော် ။
မွတ်ဆလင်ကုလားတွေက အခွင့်အရေးဆို သိပ်ယူတတ်ကြတယ် ဆရာတော် ။
BBC က ကုလားကို ထောက်ခံတော့ ရေနံဈေး ထိန်းထားနိင်တယ် ဆရာတော် ။
နိင်ငံရေးသမား BBC ကို ထောက်ခံတော့ ထောက်ပံ့စရိတ် ထိန်းထားနိင်တယ် ဆရာတော် ။
၉၆၉ တရားပွဲတွေက လူသတ် ၊ အကြမ်းမဖက် ခိုင်းပါဘူး ဆရာတော် ။
ဗလီတိုင်းမှာတော့ သံဃာဆိုရင် လက်ဦးအောင် သတ်ဖို့ သင်ရိုး ရှိပြီးသားပါ ဆရာတော် ။
ဘင်္ဂလီတွေ ရခိုင်ကို မျိုးဖြုတ်တော့ လဝက နဲ့ နစက ကို အပြစ်တင်ကြတယ် ဆရာတော် ။
ဘင်္ဂလီိကို အပြစ်မြင်ဖို့တော့ သူတို့ မေ့နေကြတယ် ။
မိတ္ထီလာမှာ မြန်မာတွေ ပေါက်ကွဲတော့ စစ်တပ်ကို အပြစ်တင်ကြတယ် ဆရာတော် ။
ဦးသောဘိတ ကိုတော့ သူတို့ မေ့နေကြတယ် ။
စစ်သားက ကုလားဆို မုန်းတယ် ဆရာတော် ။
နိင်ငံရေးသမားက စစ်သားဆို မုန်းတယ် ဆရာတော် ။
မွတ်ကုလားနဲ့ နိင်ငံရေးသမား လက်ဝါးချင်း ရိုက်နေကြပြီလား .... ဆရာတော် ။
မြို့စွန်တိုင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိတယ် ဆရာတော် ။
မြို့လယ် ဈေးရှေ့တိုင်းမှာ ဗလီ ရှိတယ် ဆရာတော် ။
ကင်တားနားကလည်း ရေနံထက် မြန်မာပြည်ကို ပိုမချစ်ဘူး ဆရာတော် ။
အသေခံဗုံးခွဲတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားကို ဘယ်အစ္စလာမ်မှ အပြစ်မမြင်ဘူး ဆရာတော် ။
သာသနာကာကွယ်ဖို့ တရားဟောတဲ့ သံဃာကိုတော့ အချင်းချင်း အပြစ်တင်ကြတယ် ဆရာတော် ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက အဲ့ဒီလိုမျိုးပါလား ဆရာတော် ။
ငြိမ်းချမ်းစွာတော့ အတူနေချင်ပါတယ် ဆရာတော် ။
နာလန္ဒာ တက္ကသိုလ်က အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊
ရခိုင်နယ်မှာ ဘင်္ဂလီ ရွာတွေကို ဖြတ်မိရင်း လည်လှီးခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊
ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ဆွမ်းခံရင်း အသတ်ခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊
မိတ္ထီလာက ဆရာတော် ဦးသောဘိတရဲ့ မချောက်သေးတဲ့ သွေးတွေက
အာရုံမှာ ပေါ်နေတော့ ဒီလူတွေနဲ့ ခပ်ကင်းကင်း နေပါရစေတော့ ... ဆရာတော် ။
ဗုဒ္ဓသာသနာကို မျိုးဖြုတ်ဖို့ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ ပြဌာန်းပြီးသားပါ ဆရာတော် ။
ဘာသာရေး မုန်းတီးလို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
အမှန်တရား တခုကို စစ်တပ်ကို မုန်းတာ တခုတည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မနှစ်သိမ့်ချင် လို့ပါ ဆရာတော် ။
ဆရာတော် သာသနာ အကျိုးကို ဆထက်တိုး ထမ်းပိုးနိင်ပါစေလို့ ..ဆန္ဒပြုရင်း
သမိုးအစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သည့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကို နာမည်ဆိုးကျန်အောင်လုပ်နေသည့် သမိုင်းတရားခံ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်) များ
ဦးဘမော်၊ ဦးမောင်မောင်သန်း၊ ကိုချို နှင့် ဘီဘီစီက မြန်မာများ
ဦးအောင်ဇော် နှင့် ဧရာဝတီမှ အထောက်ပံ့စား များ
ဦးသန်းထွဋ်အောင်၊ ဝေဖြိုး နှင့် Eleven မှ မြန်မာများ
ဦးခင်မောင်စိုး၊ ဒေါ်ခင်ခင်အိ နှင့် အာအက်ဖ်အေ က မြန်မာများ
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ၊ ဦးသားညွန့်ဦး၊ မဆုမွန် နှင့် ဗွီအိုအေ မှ မြန်မာများ
ဦးအာစရိယ နှင့် ရွေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဘုန်းကြီးများ
သမိုးအစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သည့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကို နာမည်ဆိုးကျန်အောင်လုပ်နေသည့် သမိုင်းတရားခံ (အခြားဘာသာဝင်) များ
ဝေနှင်းပွင့်သုန် နှင့် မြအေး
From : ..သီဟသစ် ( ၇.၅.၂၀၁၃)
Ref: Myanmar Express
တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတက မြောက်ကိုးရီးယားရန်စမှုများအောင်မြင်မည် မဟုတ်ဟုပြောကြား
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၉။
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့က ပြုလုပ်သည့် အမေရိကန် လွှတ်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် တွေ့ဆုံ ပွဲတွင် တောင် ကိုးရီးယား သမ္မ တ ပါခ်ဂျင်ဟီးက ကိုးရီးယား ကျွန်း ဆွယ်၏ အနာဂတ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အမေရိ ကန် ၏ ပါဝင် ပတ်သက်မှု အပေါ် မူတည် နေကြောင်း ပြောကြားသည်။
မစ္စပါခ်က မြောက်ကိုးရီးယားနှင့် မကြာခင်အထိ တင်းမာမှုများရှိပြီး နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ယနေ့ တိုင် ဝေးနေ မြဲဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
“မြောက်ကိုးရီးယားဟာ ရန်စမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်နေတယ်၊ တောင် ကိုးရီးယား အစိုးရ အနေနဲ့ ပြင်းထန်စွာ တုံ့ပြန်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပါ၊ ကျွန်မတို့ဟာ အသင့် အနေ အထား ကို အမြင့်ဆုံး အဆင့်မှာ ထားရှိ ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုးရီးယားတို့ ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေးဖြစ်နေသ၍ မြောက် ကိုးရီးယား ရန်စမှု များသည် မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မတ်လနှင့် ဧပြီလအတွင်းတွင် မြောက်ကိုးရီးယားဘက်မှ အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုးရီးယားတို့အား နျူ ကလီး ယား စစ်ပွဲ တိုက်ခိုက်မည်ဆို သည် အထိ ခြိမ်းခြောက်မှုများထုတ်ပြန်ပြီး တင်းမာမှု တိုးလာ စေခဲ့ သည်။
မကြာမီက မြောက်ကိုးရီးယားတို့သည် အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရှိ ၎င်းတို့၏ဒုံးကျည်နှစ်ကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်း သွားရာ တင်းမာမှုပြေလျော့သည့် အခြေအနေဖြစ်နေသည်။
တောင် ကိုးရီးယား သမ္မတက ၎င်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် သက် ရောက်မှု မရှိကြောင်း ပြောကြား သည်။
“နှစ်ဖက် ယုံကြည်မှု ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်း လို့ ကျွန်မအခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်၊ နျူ လက်နက် တပ်ဆင် ထား တဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားကို တောင်ကိုးရီးယားတို့ ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု တောင် ကိုးရီးယားသမ္မတက ပြောကြားသည်။
၎င်း၏ ယခုမိန့်ခွန်းသည် အိမ်ဖြူတော်တွင် အမေရိကန်သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံပြီး နောက်ရက်တွင် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ် သည်။
သမ္မ အိုဘားမား ကလည်း တွေ့ဆုံပွဲအပြီး သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြောက်ကိုးရီးယား၏ မကြာ ခင်က ရန်စမှုများသည် တောင်ကိုး ရီးယားနှင့် အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုနီးကပ်လာစေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
“အမေ ရိကန်နဲ့ တောင် ကိုးရီးယား တို့ကတော့ ညီညွတ်မှုမြဲညီညွတ်ပြီးတော့ မြောက်ကိုးရီးယားကတော့ အထီး ကျန်မြဲဖြစ်မှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆို သည်။
အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်များတွင် လှုံ့ဆော်ရေးသားသူများကို အစိုးရအနေဖြင့် အရေးယူသင့်ကြောင်း အမေရိကန်သံအမတ် ပြောကြား
အင်တာ နက် လူမှုကွန်ရက်များတွင် လှုံ့ဆော်ရေးသားသူများကို အစိုးရအနေဖြင့် အရေးယူသင့်ကြောင်း အမေရိ ကန်စင် တာတွင် မေ ၈ ရက် ညနေက ကျင်းပသော လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် (Freedom of Expression) ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် Derek Mitchell က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်၏ သဘောသဘာဝ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ခွင့် အခြေ အနေများ၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်များ၊ ဆင်ဆာတည်းဖြတ်မှုများ၊ လူမှု ကွန်ရက် များတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်အပေါ် အလွဲသုံးစားပြုကာ ရေးသားနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
စာရေး ဆရာ ဖေမြင့်နှင့် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်တို့ကမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချို့သော ဥပဒေများသည် လွတ် လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် အပေါ် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေသည်ဟု ပြောသည်။ ဆက်လက်၍ ဘလော့ဂါ Pandora မှလည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်မှုသာမက လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုလည်း ဖန်တီးပေးရန်၊ ဆင်ဆာ တည်းဖြတ် မှု လျော့ပါး လာသည့်နောက် မဆင်မခြင် ရေးသားမှုများကို စောင့်ကြည့် အရေးယူရန်နှင့် မိမိ ရေးသား သည့် အပေါ်တာဝန်ယူစေရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့် မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခများတွင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များမှ တစ်ဆင့် ဘာသာ နှစ်ခု အကြား လှုံ့ဆော်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ပဋိပက္ခများ ပိုမိုဖြစ် ပွားကာ အသက်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည် . . . . .
ထို့အပြင် အမေရိကန်သံရုံး၏ လူထုအကူအညီပေးရေး လက်ထောက်အရာရှိ Michael D. Quinlan က အမေ ရိကန် နိုင်ငံတွင်လည်း ၁၉၇၀ အစောပိုင်း နှစ်များအထိ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာစနစ် ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာ တွင် ၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် ၄င်းအားဖျက်သိမ်း၍ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက် အချို့သာ ထားရှိ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး၎င်းက ဆင်ဆာတည်းဖြတ်မည့်အစား တာဝန်ယူမှု မရှိ သူ များအား တရားစွဲဆိုသည့် နည်းလမ်းကိုသာ ကျင့်သုံးသင့်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
"လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ဥပဒေကနေ သတ်မှတ်ပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်က ပြန်လည် စောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းပေးရမယ်။ ဥပမာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရေးသား ပြောဆို မှုမျိုးတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်မှုတွေ၊ အသရေဖျက်မှုတွေဆိုရင် လက်ခံလို့ မဖြစ်ပါဘူး" ဟု Michael D. Quinlan ကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် Derek Mitchell ကပင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ပြီး တာဝန်သိသော သတင်းမီဒီယာများ ပေါ်ထွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြော သည်။
"ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကို ထုတ်ဖော်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အချို့က ပန်းချီနဲ့ ဖော်ပြတယ်။ အချို့ က ကာတွန်းနဲ့ ဖော်ပြတယ်။ အချို့က စာရေးသားပြီး ဖော်ပြကြတယ်။ ဒီလိုဖော်ထုတ်ခွင့်တွေ မပျောက် ပျက်အောင် ကာကွယ်ရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မိမိကိုယ်ပိုင် အမြင်ကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခေတ်သစ် တစ်ခု ကို ရောက်ရှိလို့ နေပါပြီ။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုပါပဲ" ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဆွးနွေး ပွဲသို့ စိတ်ဝင် စားသူ ကျောင်းသား ဦးရေ ၃၀၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူ လူငယ် များမှ လူမှုကွန်ရက်များတွင် မဆင်မခြင် ရေးသားမှုများ၊ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စေ ရန် ရေးသားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များအား ပင်တိုင်ဆွေးနွေးသူများမှ ပြန်လည် ဆွေး နွေး ခဲ့ကြသည်။
လူမှု ကွန်ရက် များနှင့် ပတ်သက်၍ Derek Mitchell က "အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမှန် မဟုတ်ဘဲနဲ့ လိမ်လည်သုံးစွဲသူတွေဟာ တာဝန်ယူမှု ကင်းမဲ့ပြီး ပြဿနာတွေ ကြီးထွားအောင် လှုံ့ဆော် တတ်ကြ တယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလိုလှုံ့ဆော်တဲ့ သူတွေကို အရေးယူဖို့ လိုအပ်တယ်" ဟု ပြော သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့် မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခများတွင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များမှ တစ်ဆင့် ဘာသာနှစ်ခုအကြား လှုံ့ဆော်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ပဋိပက္ခများ ပိုမိုဖြစ် ပွားကာ အသက်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ လှုံ့ဆော်မှု များထဲ တွင် Eleven Media, BBC, Irrawaddy, DVB နှင့် RFA တို့ ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး မြို့တွင် လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ကာ မိုးသီးများ ကြွေကျ ခဲ့ခြင်းမှာ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အခြေ အနေ နှင့် မဆက်စပ်ဟု မိုး/ ဇလ က ဆိုသည် (ဓာတ်ပုံ- တေဇလှိုင်/ ဧရာဝတီ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အရှိန် ပိုမို အားကောင်း လာသော ကြောင့် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မည်လောဟု မိုး/ဇလ အနေဖြင့် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း မိုးလေဝ သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချစ်ကျော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောဆို သည်။
”ပို အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ အိန္ဒိယက ထုတ်ထားတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ထုတ်ထားပြီ။ အားကောင်း လာ ရင် ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်”ဟု ဦးချစ်ကျော်က ဆိုသည်။
လေဖိအား နည်း ရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်မှု အရှိန်ကြောင့် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့များနှင့် အနီး တဝိုက် တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပြီး ရွာရန် ရာနှုန်း ၆၀ ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေ ဒ ညွန်ကြား မှု ဦးစီးဌာနက ယနေ့ မေလ ၉ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
လေဖိ အား နည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် တိမ်ထူလျက်ရှိပြီး အချို့မြို့နယ်များတွင် မိုးရွာသွန်းမှုများ ရှိခဲ့ သည်။ သို့သော် မန္တလေးမြို့တွင် လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ကာ မိုးသီးများ ကြွေကျခဲ့ခြင်းမှာ ဘင်္ဂလား ပင် လယ် အော် အခြေအနေနှင့် မဆက်စပ်ဟု မိုး/ဇလ က ဆိုသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တခါတရံ မိုးသက် လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်သည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/ မြေပြင် လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း မိုး/ဇလက ထုတ်ပြန် ထားသည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေမှာ မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်မှသာ မည်သည့်ဒေသသို့ ရွှေ့လျားမည်ကို အတိ အကျ ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်အထိ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းအဆင့်သာ ရှိသေး ကြောင်း၊ ပထမအဆင့် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း၊ ဒုတိယအဆင့် မုန်တိုင်းငယ်၊ တတိယအဆင့် မုန်တိုင်း ၊ စတုတ္ထ အဆင့် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ ပဉ္စမအဆင့် အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင် ကလုန်း မုန်တိုင်းဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ရှိရာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အနေ အထားမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သာ ရှိသေးကြောင်း၊ ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ ဝသနှင့် ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချစ် ကျော်က ပြောသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ မေလ ၉ ရက် ညနေ ၄နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အရှေ့ တောင်ပိုင်း တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအား နည်းရပ်ဝန်းမှာ ဆက်လက် တည်ရှိ နေသည်။
မိုးရွာသွန်းနိုင်မှု ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် ကယားပြည်နယ်တွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေ သကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာ ကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိတ်စိတ် မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပြီး ရွာရန် ရာနှုန်း ၈၀ ဖြစ်ကြောင်း မိုး/ဇလက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
မိုးညိုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းထားသူ ၅ ဦးကို ပြန်လွှတ်
ပဲခူးတိုင်း မိုးညိုမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီး တရားစွဲ ဆိုထားတဲ့ မိုးညိုမြို့ နယ် က ၅ ဦးကို မြို့နယ်တရားရုံးက အာမခံ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မနေ့က ရုံးထုတ်ချိန်မှာ မြို့နယ် တရားရုံးက အာမ ခံ ပေးလိုက် တာလို့ မိုးညိုမြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။ “သူတို့ကို အာမခံနဲ့ လွှတ်ပေး လိုက်တယ်။ ဒါပေ မယ့် သူတို့က ထောင်ကျမှာတော့ သေချာတယ်။ ချုပ်ရက်က များနေတော့ ၁ လလောက် ရှိပြီလေ။ အာမ ခံနဲ့ ပြန်လွှတ် လိုက်တာ။ ထင်ကြေးပေးနေတာတော့ ၆-၇ နှစ်လောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလား အလာရှိတယ်။”
တရား စွဲဆို ခံရ သူတွေ ဟာ မိုးညိုမြို့ ပေါ်က အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ကိုနန်းထိုက် နဲ့ ကျန်သူ ၄ ဦးကတော့ မိုးညိုမြို့နဲ့ ၅ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ၀ဲကြီးရွာနဲ့ သရက်တပင် ရွာတွေက ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရား စွဲဆို ခံရသူ တွေ ထဲမှာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရား စွဲဆို ခံသူ တွေဟာ အကျိုးဖျက်ဆီးမှု၊ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးမှု ဂုဏ်သိက္ခာ စော်ကားမှု၊ ဥပဒေနဲ့ မညီ ညွတ်လုိ့ လူစုခွဲရာမှာ မလိုက်နာမှုတို့နဲ့ တရားစွဲဆိုထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို လာမယ့် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ရုံးပြန်ချိန်းထားပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံရသူတွေဟာ အမှန်တကယ် ဦးဆောင်ပြီး လုပ်တဲ့ သူတွေကို မဖမ်းဘူးလို့ အဲဒီမြို့ခံက ပြောပါတယ်။ “မိုးညိုဖြစ်စဉ်က တကယ်လုပ်တဲ့၊ ဦးဆောင် တဲ့သူတွေ ကို မစွဲဘဲ နောက်က လိုက်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းတာပဲ တွေ့ရသေးတယ်။ တကယ်လုပ်တာက မြို့ပေါ်က လုပ်တာ။ ကျနော်တို့ မဖြစ်ခင် ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ နဲ့ ၂၆ ရက်တွေမှာ လိုက်ထိန်းတယ်။ အခုက မြို့ပေါ် ကြံ့ ခိုင် ရေးက ဦးဆောင်ပြီး သံဃာတွေလည်းပါတယ်။ နယ်က သံဃာတွေလည်း ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ လူတွေလည်း ပါတယ်။ တကယ့် အမာခံ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းမခံရဘူး။” အလားတူ ပဲခူးတိုင်း ဇီးကုန်း မြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုထားပြီး ဒီနေ့မှာ ရုံးထုတ် စစ်ဆေး တယ်လို့ ဖမ်းဆီး တရားစွဲ ဆိုခံရ သူတွေ ထဲက ဦးအောင်မြတ်သူရဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်ဇင်မိုး ထိုက်က ပြောပါတယ်။ ဇီးကုန်းမြို့နယ်မှာ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုလည်း အကျိုးဖျက်ဆီးမှု၊ နေအိမ် ခြံဝင်း အတွင်း ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာစော်ကားမှု၊ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်လို့် လူစုခွဲရာမှာ မလိုက်နာမှုနဲ့ တရား စွဲဆို ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ အကြမ်း ဖက်မှု အတွင်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘုန်းကြီး ၁ ပါးကို သတ်ဖြတ် ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၇ ဦးကို တရားစွဲ ဆိုထားရာ ဒီနေ့ မှာတော့ တရားခံပြ သက်သေ အားလုံး စစ်ဆေးပြီ ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံရသူတွေ ဘက်က ရှေ့နေ ဦးသိန်း သန်းဦးက ပြောပါတယ်။
လာမယ့် မေ ၁၃ ရက်နေ့မှာတော့ နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်ကို ကြားနာမှာဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်း ဦးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါ တယ်။
လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီ တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၄၃/ ၂ဝ၁၃
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်)
နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ပြန် လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားလုံး ပါဝင်နိုင်ခွင့် ရရှိ စေရေး အတွက်လည်း ကောင်း၊ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှုကို အလေးပေးသော အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာနှင့် စေတနာကို နားလည်ကြပြီး နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက် ရေးတွင် တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသည့် နိုင်ငံသားများ အဖြစ်သို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ နိုင် စေရေး အတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ အကျဉ်းထောင် အသီးသီး တွင် ပြစ်ဒဏ် ကျခံလျက်ရှိသော နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသားများအား လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွှတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် စိစစ် ဆောင် ရွက် ရန် အစိုးရဝန်ကြီး ဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအချို့မှ ကိုယ်စားလှယ် များပါဝင်သော ''လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီ'' ကို အောက်ပါ အတိုင်း တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း လိုက်ပါသည်-
( ၁) ဦးစိုးသိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန (၃)
( ၂) ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်း အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဝန်ကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
( ၃) ဦးထွန်းထွန်းဦး အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
( ၄) ဦးအောင်စောဝင်း အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
( ၅) ဦးသန်းဌေး အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အကျဉ်းဦးစီးဌာန
( ၆) ဦးစစ်မြိုင် အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
( ၇) ဦးကြည် အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း
( ၈) ဦးလှမောင်ရွှေ အဖွဲ့ဝင် Myanmar Egress
( ၉) ဦးဘိုကြည် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
(၁ဝ) ဦးညိုထွန်း အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ချုပ်
(၁၁) ဦးရဲအောင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့
(၁၂) ဦးသူရ(ဇာဂနာ) အဖွဲ့ဝင် House of Media Entertainment
(၁၃) ဦးဥာဏ်ဝင်း အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်
(၁၄) ဦးခွန်ထွန်းဦး အဖွဲ့ဝင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်
(၁၅) ဦးကိုကိုကြီး အဖွဲ့ဝင် ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း)
(၁၆) ဒေါက်တာဝင်းနိုင် အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု
(၁၇) ဦးသိန်းညွန့် အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ်
(၁၈) ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် အဖွဲ့ဝင် မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ
(၁၉) ဦးအောင်သိမ်း အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဝန်ကြီး သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန